News - AD-mbuli elu ọhụrụ
Adgbaso ihe ọhụrụ, na-eso ije na Times, ịchụso mmụọ zuru okè nke ụlọ ọrụ MAXIMA na-eme mgbalị dị ukwuu izute ahịa ina na mgbe niile ọhụrụ, mgbe niile n'ofè. MAXIMA nọ na-arụ ọrụ na nkwalite Nrụgide Ọrụ Ikuku Kọlụm Nrụgide Ebumnuche nke ọdịdị na ọrụ kemgbe 2011. N'ikpeazụ, MAXIMA na-enwe ihe ịga nke ọma mgbe o mechara nlezianya nyocha na nyocha.
Na ọdịdị, enwere ọhụụ ọhụụ nwere agba ọcha na acha anụnụ anụnụ. Biko lee foto dị n'okpuru. Na mbupute ọhụụ, enwere otu ihuenyo 9 nnukwu agba ihuenyo, na-egosi koodu njehie kwekọrọ na usoro zuru ezu na-eduzi ndị ọrụ idozi njehie ahụ, nke na-eme ka ọrụ dị mfe. Agba ọhụrụ dị mma na ihe ijuanya.
Na okwu nke oru, MAXIMA eweputala oru ohuru nke nnwere onwe ha. Free njikọ pụtara na ogidi niile bụ otu; kọlụm ndị nwere otu ikike ahụ nwere ike ijikọ otu otu dị ka setịpụrụ n'oge ọ bụla. Iji maa atụ, enwere igwe ikuku 16 na arụ ọrụ njikọ anaghị akwụ ụgwọ, ị nwere ike ịhọrọ iberibe ha ọ bụla iji kpọkọta dị ka otu setịpụrụ, dịka 2-, 4-, 6-, 8-, ma ọ bụ ruo ogidi 16, site na ntọala dị mfe -p, dabere na isi wireless nlereanya. Ọrụ a hapụrụ echiche nke kọlụm bụ isi na ogidi ohu. Nwelite niile nwere ike ịbụ isi kọlụm ma tinyekwa ọnụ ọgụgụ aka ike ọ bụla nke ogidi n'okpuru otu ikike dịka ntọala site na ntọala ntọala dị mfe.
MAXIMA ga-anọ na-etinye ihe niile iji soro ahịa ma na-eduga ma na-eme, na-arụ ọrụ maka nwelite na izu oke nke ụdị ọhụrụ ahụ Nrụpụta Ọrụ Kọlụm Dị Ukwuu. N'ọdịnihu dị nso, MAXIMA ga-enwekwu ọganiihu ma mepee ọtụtụ ọrụ iji kwado ojiji na ndozi kwa ụbọchị. Biko debe atụmanya na ekele maka nlebara gị.